सेयर बजारबारे बुझेर आईपिओ भर्नुहोस्! - Himal News Express
सेयर बजारबारे बुझेर आईपिओ भर्नुहोस्!
हिमाल समाचार २५ माघ २०७७, आईतवार १५:०० 339 पटक हेरिएको
काठमाडौं- आईपिओ अगाडी सेयर बजारको बारेमा केही बुझ्नुहोस् ।
पहिला तपाईले सेयर किन्न लागेको (लगानी गर्न लागेको) कम्पनीको सम्पूर्ण विषयमा जानकारी लिनुहोस । वित्तीय, संस्थागत तथा बजार अवस्थासहित सम्पूर्ण बित्तीय अवस्था हेर्नुहोस । अमेरिकामा तीन तीन महिनामा कम्पनीहरुले वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्छन् । नाफा घटेको, प्रति सेयर आम्दानी घटेको कम्पनीको सेयर खदि गर्नु अगाडी सोच्नुहोस् ।
अर्कोकुरा कुनै कम्पनीको सेयर एक्कासी उच्च विन्दुमा पुगेको छ भने पनि त्यो अवस्थामा सेयर नकिन्नुहोस किनभने संस्तोमा सेयर किनेकाहरुले बेचिरहेका हुन्छन् र माग भन्दा आपूर्ति धेरै भएपछि अर्थसास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार नै मुल्यमा गिरावट आउँछ नै । सस्तोमा सेयर किनेर बसेकाहरुले भाऊ बढेको बेलामा बेच्छन् भन्ने कुरा सेयर बजारमा आफूले पनि गर्ने र अरुले पनि गर्छन् भन्ने विर्षन भएन ।
आईपीओ भर्नका लागि तपाईले यसरी सक्नुहुनेछ ।
यो सामाग्री क्लिकमाण्डु र अनलाइनखबरको सहयोगमा तयार पारिएको हो ।
दैनिक संक्रमित ११ हजार
ठूला सहरका विद्यालय एक
प्रधानमन्त्रीले भोलि देशबासीका
१० वटा हिमालमा ४९
खोटाङमा फर्निचर उद्योगमा आ’गला’गी,
जीप दुर्घटनामा ४ जनाको
वैशाख ११ गते धरहरा
‘फाइभजी’ सेवा चाँडै परीक्षण
फेरि बढ्याे प्रदूषण